Markii aan geliyaan si ay u YouTube, waxaa daaweysey video sida a 4: 3 video, iyo ulihiisa gudban ku darayaa madow dhinacyada. Hab kasta oo inuu iyaga ka dhaqaajiyo?
Sidoo kale la kulmaan dhibaato la mid ah? In tutorial, waxa aad baran doontaa hab fudud oo si deg deg ah noola soo baxay qataarrada madow ee YouTube videos isticmaalaya Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Waa ah qalab video haboon in aad siisaa awood ay uga noola 4: 3 ama 16: 9 oo aan iskala image ka. Sidaa daraadeed, waxa kale oo aad qabsato karaa size jir ah gacanta dooro kaliya ay qeyb ka doonayo ee aad video. Hoos u yimaado hage tallaabo-tallaabo.
Fiiro Gaar ah : Tani Cropper YouTube sidoo kale waxaa laga heli karaa Mac OS X, Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) . Waxay wadaagaan feature la mid ah, oo hoos ku hage qaadan darbo screen Windows. Hubi habab badan oo noola videos online halkan .
1 Load files YouTube
Burcad video qalab, iyo dooro "16: 9" (Widescreen) ama "4: 3" (standard) in ay yimaadaan interface ugu weyn. Si aad ku dari files YouTube galay barnaamijkan, guji "Import" xitaa folder file ku wadid aad u adag oo ka dibna riix "Ok" si ku shuban oo dhan oo iyaga ka mid. Tani Cropper YouTube bixisaa ah "User ee Album" si aad u maamuli files keeno, Oo aad dhawrtid files asalka dhawrsan. Marka aad dajiyaan oo dhan iyaga, jiita ee jeedi mid file galay Timeline Video ah oo aan diyaar u talaabo 2.
2 Dalag files YouTube
Muujinta video ee Timeline, xaq waxa guji dooro "Dalag" si ay u helaan suuqa kala dalagga. Suuqa kala Tani waa hadal laba-daaqad, waxaad is barbar saamaynta-waqtiga dhabta ah fudayd daynin. In submenu hoose, aad leedahay 3 fursadaha in ay qasbaan video ah. Dooro 16: 9 ama 4: 3, si aad u hesho tirada jir doonayo halka weli haysta saamiga dhinaca midig. Haddii kale, Gacanta dooran, aad jiidi karaan lacag jaban si aad u hesho wax video size jir. Haddii qalad wax dhacaan, guji "Dib u celi" badhanka soo ceshano ka xoq.
Talooyin: Waa in aad xulan raadiyaha dhinac baahisey sida aad hore u dooran markii laga galo suuqa kala barnaamijka. Haddii kale, bar madow la abuuri doono.
3 Save the video YouTube jaray
Marka saamayn wax soo saarka kaa dhergiyaa, guji "Abuur" inay u dhoofiyaan abuurkiinna. Laga soo bilaabo suuqa kala saarka muuqata ka, riix "YouTube" tab si ay u geliyaan si toos ah online hadda. Waxaad u baahan tahay oo keliya in aad buuxiso warbixin aad xisaabta, iyo dar horyaalka, sharaxaad, keywords, iwm si ay u helaan qaab ay filaayo in website YouTube. Haddii loo baahdo, waxa kale oo aad sax karaa "Facebook", "Twitter" checkbox in aan fariin u dirno ogeysiis ah in aad saaxiibada ama qoyska.
Haddii kale, soo qaado horena qalabka sida iPad, Kindel Naarta, PSP ah inay ku raaxaystaan ​​la-shaashad buuxda on go ah. Ama badbaadin in wmv, MOV, AVI, MP4, iwm si ay u ciyaari haboon on your computer.
Talooyin Bonus: Haddii aad sidoo kale doonayaa inaan download YouTube videos, Wondershare Free YouTube Downloader waa doorashada ugu saxsan. Sida ripper YouTube ah, waxa ay taageertaa Dufcaddii download video kasta YouTube ka YouTube playlist, YouTube channel, category, iyo xataa User ee Page. More wax wanaagsan, waxay u saamaxdaa xulashada ka-doorashada xallinta kala duwan, iyo fan Tababaraha YouTube ah in Radidiyaha oo dhan downloads YouTube.
> Resource > YouTube > YouTube Cropper: Sida loo Dallaga YouTube Videos